GvSIG vrs. Manifold, qaababka soo galitaanka - Gofumed
GvSIG vrs. Manifold, qaababka wax-soo-saarka
Luulyo, 2008 GvSIG, GIS kala cayncayn ah
Maalin wacan, akhris wanaagsan iyo caddayn wanaagsan oo ku saabsan sida GvSIG u sameeyo iyo dabcan, si aad u barbardhigto Manifold
Aynu aragno sida labadan qalab u dhaqmaan habka ay u akhriyaan:
Maareynta Mashruuca: Habka gvp waa maamulaha xogta, kuma jiraan macluumaadka gudaha. Sidoo kale ArcView Apr, ama sida ArcMap mxd. Waxaad "xiriirin kartaa" xogta dibadda Maareynta Mashruuca: format .map kala cayncayn ah waa nooc ka mid ah Handler, laakiin waxaa ku jiri kara macluumaadka labada dulinka, raster iyo tabular. Waxa kale oo aad keydin karaa xogta ee database-dibadeed (sida ArcView geodatabase) iyo awoodo "linkar" data dibadda
Dukumentiyada: mashruuca gudahood GvSIG ka qabtaa saddex nooc oo dokumentiyo: Views, miisaska iyo khariidado. Sida ay ahayd in ArcView (Views, Shaxan, Layouts). Views yeelan karaan heerarka kala duwan iyo waxaa la samayn karaa koox sida lakabyada ArcMap Qeybaha: Mashruuca Manifold gudihiisa, waxyaallaha u dhigma waxa GvSIG wax ka qabtaan waa "Khariidado, Miisaan, iyo Layouts".
Hagaajinta bey'addaani way ka duwan tahay labada dhinacba, inkastoo suurtogal ah inay sameeyaan isla sidaas, Manifold wuxuu wax ka qabtaa noocyada 16 ee heerkan isku mid ah oo ay ku jiraan qaababka, garaafyada, dusha, profiles, faylasha iyo faallooyinka.
Faylasha sawirka: GvSIG wuu akhrin karaa kml / kmz, dxf, dwg 2000, dgn v7.
Waxaad bedeli kartaa shp iyo dxf Faylasha sawirka: Kala cayncayn ah u baahan files dulinka dejinta (ma linkar karo), iyo waxay aqoonsan tahay KML / KMZ, billabo R13, R14 iyo R15 (2000) sidoo kale dxf2000 iyo dngv7. Kala cayncayn ah ma edit karaa qaabab kuwaas, sawiro dejinta noqon gudahood database a ah in uu noqon karaa dibadda ama la jira gudahood .map ah
Noocyo kale: GvSIG waxay ku xiran kartaa xogta qaababka OGC-ga ee la midka ah sida WFS, WCS iyo ArcIMS ... sidoo kale webka Context Context
iyo iyada oo loo marayo JDBC ka MySQL, SQL iyo PostGIS Noocyo kale: Kala cayncayn ah dajiyaan karaa (foomka dulinka) of tiro badan oo ah qaabab, oo ay ku jiraan e00, CSV, tab, txt, GML, html, IDRISI VCT, MIF, ilaha xogta xls oo ay ku jiraan Oracle, SQL iyo ODBC
Badankood waxay ku xiran yihiin habka "isku xiran"
Marka laga reebo qaabab aan kala-sooc lahayn, MrSID, ECW, ENVI iyo GeoTIFF ayaa lagu daray; Waxa kale oo aad ku xiran kartaa Adeegyada WMS iyo adeegyada ArcIMS Sawirrada:
Marka laga reebo qaababka aan ku-meel-gaarka ah, waxay taageertaa SID, ENVI, SPOT, ECWP iyo ilo kale oo faahfaahsan oo kale oo la soo dhoofiyo ama "la xariira".
Waxay u baahan tahay Plugin for MrSID laakiin waxay u shaqeysaa gaabis.
Waxay kaloo ku xiran tahay adeegyada OGC
Waxaa intaa dheer waxaad ku xidhmi kartaa adeegyada Google Earth, Virtual Earth, Khariidadaha Yahoo, Street Street
Guud ahaan, GvSIG waxay haysaa sababaha abuurista: si ay ula qabsadaan heerarka OGC iyo qaababka ugu wanaagsan ee software-ka Kala cayncayn ah waxay leedahay astaamo badan oo marka la eego aqoonsiga qaabab kala duwan, iyo xataa taageertaa heerarka Nice halkaas ka 6 aan rasmi version waafaqsan. Marka dadka weydiin baxay sarbeeb la mid ah hawshiisu: "heerarka Nice halkaas waa kuwo gaboobey"
ArcView Dgn Dwg Google Earth GvSIG OS KML GIS kala cayncayn ah SHP
Post Previous«Previous GvSIG: Dareenka koowaad
Post Next Sidoo kale waxaan haystaa nololNext »